Nhau - Zvakanakira nekukanganisa magurovhosi eguru, magurovhosi eganda uye magurovhosi ekotoni anodziya zvakanaka
Zvakanakira nekukanganisa magurovhosi eguru, magurovhosi eganda uye magurovhosi ekotoni anodziya zvakanaka
Zvakanakira nekukanganisa magurovhosi eguru, magurovhosi eganda uye magurovhosi ekotoni anodziya zvakanaka? Panyaya yekupisa, magurovhosi eguruva ari nani zvishoma pane magurovhosi ekotoni, asi akaderera zvishoma pane magirovhosi eganda. Asi ikozvino kune akawanda marudzi emagurovhosi magurovhosi, kune zvakare Plush makushe magurovhosi, kudziya maitiro zvakare kwakanaka kwazvo.
Izvo zvakanakira magurovhosi eguru: akapfuma maitiro, akapfava uye anofema, yakanaka yekumwa mvura, iri nyore kuchenesa.
Kukanganisika kwemagurovhosi egurovhosi: kamwe chete kevhosi magurovhosi ane zvakajairika kutonhora kupisa maitiro uye makomba makuru ekuruka.
Ndeipi inonyanya kudziya: magurovhosi ekotoni kana magurovhosi eganda
Magirovhosi eganda ari nani pakuramba achidziya. Leather gurovhosi imhando yeglove ine yakanakisa kupisa kuchengetedza kuchengetedza mhedzisiro, kunyanya dehwe regurovhosi neganda pamusoro, ine yakanaka kupisa kuchengetedza maitiro uye elasticity. Kunyangwe iyo yekupisa yekuisa mashandiro ekugadzirwa kweanogadzira magurovhosi magurovhosi ari mashoma murombo, zviri nani pane makushe magurovhosi.
Magorovhosi ekotoni anodhura pane magirovhosi eganda, asi iwo anodziya zvishoma. Asi ikozvino kune mamwe magurovhosi ekotoni, pamusoro pacho ikotoni, mukati mayo velvet, isaputike nemhepo uye yekupisa mhedzisiro yakagadziridzwa zvakanyanya.
Post nguva: Oct-22-2020
Kero:Room 901, Yuye Building, No. 877 Chenbei Road, Yiwu City, Zhejiang, China